यूएन मिसनको प्रश्नपत्र ‘लिक’ले प्रहरीमा हंगामा : RajdhaniDaily.com
Homeप्रमुखयूएन मिसनको प्रश्नपत्र ‘लिक’ले प्रहरीमा हंगामा
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)को शान्ति मिसनमा जान लिइने नेपाल प्रहरीतर्फको आन्तरिक परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन अघि बढाएको छ ।
एक दर्जन बढी प्रहरी निगरानीमा
के कसरी कारण प्रश्नपत्र आउट भयो ? कोको संलग्न थिए ? भनेर अनुसन्धान हुँदै छ । केहीलाई निगरानीमा राखेका छौं, छिट्टै सत्यतथ्य ल्याउँछौं ।
वसन्त लामा, डीआईजी एवं छानबिन समिति संयोजक
प्रधान कार्यालयबाट साइबर ब्युरोमा सरुवा भएका कुमार शाहको भाइबरमा प्रश्नपत्र भेटिएको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ । यस्तै, यूएन शाखामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी सुरेश बमको पनि सो प्रकरणमा संलग्नताको आशंका छ ।
छानबिन समितिको निष्कर्ष कुरौं, त्यसपछि केही कुरा आउँला, केही आए त्यहीअनुसार सिफारिस होला ।
वसन्त कुँवर, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
घटनाको अनुसन्धान गर्न बनाइएको छानबिन समितिका संयोजक डीआईजी लामाले अनुसन्धान जारी रहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिए ।
‘के कसरी कारण प्रश्नपत्र आउट भयो ? कोको संलग्न थिए ? भनेर अनुसन्धान हुँदै छ । केहीलाई निगरानीमा राखेका छौं, छिट्टै सत्यतथ्य ल्याउँछौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआईजी लामाले राजधानीसँग भने ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्तासमेत रहेका सएसपी वसन्त कुँवरले प्रश्न पत्र आउट गर्नेहरूउपर के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा टुंगो लाग्ने जानकारी दिए ।
‘छानबिन समितिको निष्कर्ष कुरौं, त्यसपछि केही कुरा आउला, केही आए त्यहीअनुसार सिफारिस होला,’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले भने ।
कोरोना महामारीले निम्त्याएका जनजीविकाका समस्या एकपछि अर्को गरी विकराल बन्दै गएकाले अब प्रकृतिमा लकडाउनमा केही हेरफर र परिमार्जन जरुरी हुन गएको छ । करिब...
वितरण प्रणालीमा सुधार गर